किट सकिएपछि चितवनको कोभिड-१९ परीक्षण प्रयोगशाला बन्द – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख १० गते १७:१२
पिसिआर नेगेटिभ हुँदा बेपरवाह नबनौं, पोजेटिभ हुँदैमा नआत्तिऔं
प्राथमिकता घटेकाले परीक्षणको दायरा घटेको हो : स्वास्थ्य मन्त्रालय
चितवनमा स्थापना गरिएको ‘भरतपुर कोभिड-१९ परीक्षण प्रयोगशाला’ मा कोरोना परीक्षणको काम रोकिएको छ। पिसिआर परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने रिएजेन्ट केमिकल सकिएपछि आइतबारदेखि कोरोना भाइरस परीक्षणको काम रोकिएको हो।
चितवनमा किट सकिएपछि स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि हेटौंडा पठाउन थालिएको छ। जिल्लामा संकलन भएको नमुना सोमबारदेखि हेटौंडा पठाइएको भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लिलाधर पौडेलले जानकारी दिए। काठमाडौंबाट मंगलबार नै आवश्यक किट आइपुग्ने भरतपुर अस्पतालले बताएको थियो। तर, बुधबार दिउँसोसम्म पनि किट नआएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ।
एक साता अघिदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग किट माग गरिए पनि मन्त्रालयले आवश्यक किट उपलब्ध गराउन नसकेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीले जानकारी दिए। ‘संघीय सरकारसंग हामीले आवश्यक किट माग गरेका छौँ। हिजोमात्र ५० वटा भिटिएम आयो। त्यसले मात्र हामीले काम गर्न सकेनौँ,’ डा. तिवारीले भने, ‘बुधबार संकलन भएको स्वाब पनि हेटौंडा पठाएका छौँ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ सय ५० वटा पिसिआर किट र आरएनए रिएजेन्ट दिने जानकारीमा आएको तिवारीले बताए। यो किट भोलिसम्म आइपुग्ने उनको विश्वास छ। रिएजेन्ट प्राप्त हुनसाथ परीक्षण पुनः सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए।
यहाँका सरकारवालाहरूको पहलमा चैत्र २३ गते प्रयोगशाला स्थापना भएको थियो। कोरोना भाइरसको नियमित परीक्षण भने २४ गतेदेखि भइरहेको थियो।
यहाँबाट अहिलेसम्म ३ सय २० वटा नमुनाको परीक्षण गरिएको छ। जसमध्ये २ जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। अहिले उनिहरूको भरतपुर अस्पतालमा राखेर उपचार भइरहेको छ। यस्तै चितवनमा र्‍यापिड डाइग्नोष्टिक टेस्ट (आरटिडि) किटको समेत अभाव भएको छ।